Ammaanka Soomaaliya waa Udub dhexaadka jiritaanka Dadka Soomaaliyeed
w/Q Ahmed Qassim FArah
Dawladda cusub ee dhawaan lagu dhisay dibadda dalka, Kenya waxaa sugaya hawl aan yareyn. Hasayeeshee, waxa ugu horeeya ee ay hadal hayaan dadka Soomaaliyeed iyo bulsho weynta caalamka waxa ay tahay "Hub kadhigista" - Disarmament. Hadaba, sidee bay sahal u noqon kartaa in hawl gal hubkadhigisa loogaga fuliyo dalka Soomaaliya oo mudo 13 sano ah kusoo jiray dagaalo sokeeye iyo is bar bar yaacii dhibaatadda badnaa? Bulsho walba oo caalamka kunool waxa ay qaab nololeed keedu kudhisan tahay qaab dhismeed ay degsadeen, sida in la helo (b) amni, (t) hoy, (j) cuno, (x) biyo iyo (kh) waxbarasho. Bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba waxa ay kawada siman yihiin baahida loo qabo qodobada aan kor kusoo xusay. Balse, qormadan waxaan si faah faahsan ugaga hadli doonaa "amniga" hubka dhigista.
Ammaanka: Caalamkan aynu kunool nahay, wax waliba waxa ay kudhisan yihiin kala dambeyn. Hadii aysan jirin kala dambeyn wax walba uma ay dhacayaan sida loogu talagalay. Dawladda cusub ee uu hogaaminayo, C/llaahi Y. Faarax, waa middii labaad ee ceynkeeda ah oo lagu soo dhiso dalka dibaddiis. Waxa ay ahaayeen, iyada iyo middii kahoreysayba tilaabooyin loo qaaday dhanka san. Hasayeeshee, hal cillad oo soo wajahday dawladdii kahoreysay middan, waxa ay aheyd inay ku guul dareysatay wax kaqabashada xaaladaha amniga oo udub dhexaad u ahaa jiritaankeeda, halka dawladda cusub ay hormarisay ama ay muhiimadda siisay xaaladaha ammaanka. Mar walba oo ladoonayo in maamul uu meel maro hindise-hiisa waxaa loobaahanyahay in la helo, cuddad ciidan iyo shacab taageero buuxda u haya maamulka, "dawladda".
Mararka qaarkoodse, shacabku waxa ay iska indhatiraan dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin, sida shacabka Soomaaliyeed. Hadii ay dhacdo in shacabku ay garan waayaan dantooda, waxa jira dadyaw ay iyagu u xilsaarteen inay matallaan ilaa heer maamul oo ay soo doorteen. Sidaas darteed, shacabka rabitaankooda waxa ugaga masuul ah masuuliyiintooda oo ay u xil saarteen danahooda. Arinta ammaanka maaha mid sahlan ama la dhayalsankaro. Waayo, waxa ladoonayaa in dib loogu soo celiyo kala dambeyn dal muddo 13 sano ah kusoo jiray dagaal sokeeye iyo dagaalo aan ahmiyaddooda sidaasi usii buurneyn.
Sida aynu kawada dhageysannay idaacadaha ama aynu ka aqrinay jaraaiddada caalamka. Madaxweynaha dawladda cusub waxa uu kacodsaday in lasiiyo ciidan tiradiisu ay gaareyso 15,000 ilaa 20,000 oo African ah. Dalalka ku bahoobay 'African Union', waxa laga filayaa inay ciidamo udiraan dalka Soomaaliya, balse aragtida shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan ciidamada shisheeyaha ah ee iman doona dalka waxa ay u muuqataa mid murugo leh. Soomaaliya maanta waxa ay joogtaa heer laga samata bixiyo qori caaraddii oo ay soo saarneyd muddo 14 sano kudhawaad ah. Ummadda Soomaaliyeed maanta majoogto heer ay tahay mid xulasho leh. Maah maah shisheeye ayaa oraneysa, "Tuugsade Xulasho umaysan sugnaan". Hadii aynu nahay Soomaali, maanta majoogno heer aynu niraahno waxaan rabnaa ciidamo sidaas iyo sidaas ah. Balse waxa aynu kujirnaa xaalad u baahan gar gaar deg deg ah, dadyawga inoo fidinayana waa dadyaw aan nagu af, diin, jinsi iyo dhaqan toona aheyn. Waxaan kusoo jirnay dagaal aan jid iyo jaho toona laheyn in muddo ahba.
Marka aad dhex marto dadka Soomaaliyeed gobolkasta oo ay kunool yihiin ba waxa ugu horeeya ee ay afka ku dhuftaan waa, "Alloow Dawlad Nasii". Shacabku waxa uu u muuqdaa inuu kadaalay dagaalkii una baahan yahay dawlad iyo jiritaankoodii oo dib loo soo celiyo. Balse wali waxa ay kusugan yihiin xaalad ay yihiin kuwo taageeraya dadyaw dano gaara wata oo doonaya inay kumeel marsadaan dana hooda gaarka ah ka hor imaasho ay ka hor imaadaan hindisaha dawladda cusub ee dib u hanashada xaaladaha amaanka ee dalka. Dhamaan dadyawga Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ba way daney nayaan dawlad uu dalka yeesho iyo kala dambeyntii oo dib loo helo. Laakiin, wali waxa ay ka eegayaan arinta taagan ee maanta dalku uu kusugan yahay dhanka xun. Waa run ciidamo ajnabi ah oo dalka lakeeno inay dalka soo geliyaan cuduro aan dalka horay uga jirin, dhaqamo aan horay loo aqoon, iyo diimo aan aheyn tan Islaamka ee xaqa ah.
Aqristoow, wax walba marka la qiimeynayo waxa ay leeyihiin faaiido iyo khasaare labaduba, balse marka lais bar bar dhigo faaiidooyinka iyo khasaarooyinka ayaa waxa loo gudbaa waji xulasho ah. Wajigan xulashada ah waxa laqiimeeyaa hadba kii badan (faaiidooyinka iyo khasaarooyinka). Tusaale ku haboon arintan waxa noqon kara, "Maanta Soomaaliya waxa looga yaqaanaa meelo badan oo caalamka kamid ah, 'godkii maddoobaa ee dawlad la'aanta' waxa ayna soo martay sadex iyo toban sano oo dawlad la'aan ah, in dawlad dib loo helana waa danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaanba. Hadii aan lahelin dawlad, dadkii way cirib tirmayaan oo waxaa ka qaalib noqonayo dagaal ooge mooryaanoon diir naxeyn. Hadii dawladda cusub ay kuguuleysato inay hesho ciidamo ammaanka suga oo dalka lakeenana, waxa uu dalku qarka usaarmayaa in cuduro badan oo aan dalka kajirin ay soo galiyaan ciidamada iman dooan. Sidoo kale waxa macquul ah iyana in ay saameyn kuyeeshaan dhaqanka iyo diinta oo ay barxaan". Hadaba, xaaladdu waa "Laba daran mid dooro".
Hadii aynu nahay Soomaali waxa aynu hubnaa, hadii aan dawlad lahelin inay naga qaalib noqon doonaan qab qab layaal aan marnaba faaruqineyn danahooda gaarka ah. Halka, hadii dawlad la helo oo ay imaadaan ciidamo shisheeye ah ay dhici karto inay cudur soo galiyaan dalka ayna misena dhici karto inaysanba soo galin. Suura gal nimada ay ciidamada shisheeye cudurada ku gudbin karaan waa kuwo aad u hooseeya. Halka, suura gal nimada ay dagaal oogayaasha dib ugu afduuban doonaan shacabka Soomaaliyeed uu aad uga sareeyo marka loo bar bar dhigo qodobka keenidda ciidamada shisheeye.
Had iyo dan, xal u helidda xaaladaha ceynkan oo kale ah waxa ay u baahan yihiin in la qabto dooddo ay ka qey qaataan dadweynaha Soomaaliyeed kooda yar iyo kooda weyn intaba.Websites ay Soomaalida leeyihiin ee ay gacanta ku hayaan iyo idaacadahu, waxaan yara dareynsiin lahaa inay haboon tahay inay qabtaan dooddo loogaga hadlayo arimaha taagan sida, "Ciidamo shishiiye oo dalka lakeeno sidee u aragtaa?" Si qof walba uu aragtidiisa uga kadhiibto arinta ammaanka iyo xasiloonida dalka maadaama ay tahay arin si guud dadka soomaaliyeed u saameynaysa.
Ahmed Q. Farah